စိတ်ထက် ကိုယ်က မြန်နေတဲ့အခါ စိတ်ညစ်မနေနဲ့ 18+ – Gentleman Magazine
စိတ်ထက် ကိုယ်က မြန်နေတဲ့အခါ စိတ်ညစ်မနေနဲ့ 18+
စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါလို့ စိတ်ညစ်မနေဖို့ရာ
တောဘုရင် ခြင်္သေ့ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခန့်ညားလှတဲ့ သမင်ဖိုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နှင်းတောင်ပေါ်က နှင်းလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် နို့တိုက်သတ္တ၀ါမျိုးစိတ်တိုင်းမှာ တူညီတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒီအချက်ကတော့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ အရမ်းကို မြန်ဆန်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဖိုသတ္တ၀ါတိုင်းက စိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခုတည်းကိုပဲ ဦးတည်ပြီး လှုပ်ရှားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုသတ္တ၀ါတွေထဲမှာ လိင်မှုကိစ္စကို အချိန်ကြာနိုင်သမျှကြာအောင်ဆွဲထားပြီး သာယာမှုကို ပိုမိုခံစားချင်တတ်ကြတာက လူသားတွေပဲ ရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားတို့၊ ကျုပ်တို့လို ယောင်္ကျားတွေအားလုံးက ကိစ္စပြီးဖို့ကို မထိန်းနိုင်ပဲ ကိုယ့်ပါတနာထက် မြန်မြန်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကျေမနပ်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ အလိုမပြည့်သေးခင် ကိစ္စပြီးသွားတတ်တဲ့ပြဿနာကို ယောင်္ကျား (၃)ဦးမှာ (၁)ဦးနှုန်း ကြုံတွေ့ခံစားနေကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်အတွက်တော့ သူကိုယ်တိုင် ဒါမှမဟုတ် သူ့ရဲ့ပါတနာ အလိုမပြည့်ခင်မှာ ကိစ္စပြီးသွားတိုင်း ကျရှုံးမှုတစ်ခုလို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီလိုထင်မိတာ မှားနေတယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ ?
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရ ကိစ္စအမြန်ပြီးတာကို အလိုမကျတတ်တာက လူသားမျိုးနွယ်မှာပဲ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယောင်္ကျားတွေအားလုံးက အပြာဇာတ်ကားတွေထဲကလို လိင်တံအရှည်ကြီးနဲ့ အချိန်နှစ်နာရီလောက်ကြာအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ ကလေးမရနိုင်တော့ပဲ လူသားမျိုးစိတ်တည်မြဲနေနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ (၁၀)စက္ကန့်လောက်ပဲ ကြာတယ်ဆိုတာက ကလေးရဖို့ အခွင့်အလမ်းပိုများပြီး မျိုးဆက်ကို ပြန့်ပွားစေနိုင်တယ်လို့လည်း ပညာရှင်တွေက ပြောထားပါတယ်။
လူသားတွေမှာ ဟိုအရင်အချိန်တွေတုန်းကလို သားရဲကောင်တွေ၊ ပြိုင်ဘက်မျိုးနွယ်စုတွေ၊ ဘေးဒုက္ခအန္တရာယ်တွေ မရှိတော့တဲ့အတွက် မြန်မြန်ဆန်ဆန် လိင်စိတ်နိုးကြွ၊ မြန်မြန်လုပ်၊ မြန်မြန်ပြီးတဲ့ ခေတ်မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီလို ယနေ့ခေတ်ရဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို အစွယ်ဖွေးဖွေးနဲ့ ကျားတစ်ကောင် ရောက်မလာနိုင်တော့တဲ့အတွက် လိင်ကိစ္စသာယာမှုကို စိတ်အေးအေးနဲ့ အချိန်ကြာကြာ ခံစားချင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အလိုမပြည့်ခင် ကိစ္စပြီးတာဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုတွေနဲ့ မသက်ဆိုင်ပဲ ကုသရခက်ခဲတယ်လို့ ဆရာဝန်တွေက ဆိုပါတယ်။ သာမာန် အမေရိကန်လူမျိုးတစ်ယောက်ဟာ (၁၃)မိနစ်လောက်ကြာနိုင်ပြီး၊ ဥရောပသားတွေကတော့ (၁၀)မိနစ်လောက်ပဲ ကြာတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အလိုမပြည့်ခင် ကိစ္စပြီးသွားတဲ့အတွက် မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ တကယ့်ပြဿနာကြီးကြီးမားမား မရှိပါဘူး။
သေချာတာကတော့ စိတ်နဲ့သက်ဆိုင်ပြီး အချိန်တစ်မိနစ်တောင်မခံတဲ့ ယောင်္ကျားတွေဟာ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ပိုဖြစ်တတ်သလို အိပ်နေရင်းနဲ့တောင် ကိစ္စပြီးသွားတတ်ကြပါသေးတယ်။ ဒီအခြေအနေအထိဖြစ်တဲ့ အရေအတွက်ကတော့ နည်းလွန်းပါတယ်။ အချိန်ကြာကြာ သာယာမှုကို ခံစားနိုင်ဖို့အတွက် ကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်းတွေ ရှိပေမယ့် အမျိုးသားတော်တော်များများက အမြန်ကုစားနိုင်ဖို့ကိုပဲ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါတယ်။
အမြန်ကုထုံးတွေကတော့ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ လိင်တံကိုဖြန်းရတဲ့ စပရေးတွေ၊ ဆေးပြားတွေ (တကယ်တော့ ဒီဆေးပြားတွေက စိတ်ကျရောဂါအတွက်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်) ကနေ လိင်တံရဲ့အာရုံကြောကို ဖြတ်လိုက်တာတွေအထိ အနုနည်းရော အကြမ်းနည်းတွေပါ ရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ သုက်လွှတ်ခြင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အာရုံခံစနစ်ကလည်း သင်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတာကြောင့် နာမည်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ Viagra လိုဆေးမျိုးကတောင် ခဏတာအတွက်ပဲကောင်းပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုကိစ္စအတွက် ယောင်္ကျားလေးဘက်ကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကျေနပ်ဖြစ်သလို မိန်းကလေးဘက်ကလည်း အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ဆရာဝန်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေရဲ့ အဆိုအရတော့ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါတတ်တဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့စိတ်ကို ဆန်းစစ်ပြီး စိုးရိမ်စိတ်တွေရဲ့ ရင်းမြစ်ကို ဖော်ထုတ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အပြာကားတွေထဲက ဇာတ်ဆောင်အမျိုးသားတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး စိုးရိမ်စိတ်ဝင်နေတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ပါတနာ မိန်းကလေးက မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကြာချိန်မျိုးကို မျှော်လင့်နေတာလားဆိုတာတွေကို သိဖို့လိုပါတယ်။
ဒီလိုစိုးရိမ်စိတ်တွေ လျော့ပါးသွားမယ်ဆိုရင် စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ လိင်မှုကိစ္စမှာ လိင်တံကို အထဲသွင်းဖို့တစ်ခုတည်းက အရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ အထဲသွင်းဖို့ထက် အပြန်အလှန် ဖြေဖျော်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် စိုးရိမ်စိတ်တွေနည်းသွားပြီး ပိုပြီးစွမ်းဆောင်နိုင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အလိုမပြည့်ခင် ကိစ္စပြီးသွားတာက တစ်ခုခုချို့ယွင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး အမျိုးသားတို့ရေ။ စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကိုအေးအေးထားမယ်ဆိုရင် စွမ်းဆောင်မှုတွေ ပိုကောင်းလာမှာ သေချာပါတယ်။
စိတျသှားတိုငျး ကိုယျမပါလို့ စိတျညဈမနဖေို့ရာ
တောဘုရငျ ခွင်ျသကွေီ့းပဲဖွဈဖွဈ၊ ခနျ့ညားလှတဲ့ သမငျဖိုကွီးပဲဖွဈဖွဈ၊ နှငျးတောငျပျေါက နှငျးလူတှပေဲဖွဈဖွဈ နို့တိုကျသတ်တဝါမြိုးစိတျတိငျးမှာ တူညီတဲ့အခကျြတဈခုရှိပါတယျ။ ဒီအခကျြကတော့ လိငျဆကျဆံတဲ့အခါမှာ အရမျးကို မွနျဆနျတယျဆိုတာပါပဲ။ ဖိုသတ်တဝါတိုငျးက စိတျကနြေပျမှုတဈခုတညျးကိုပဲ ဦးတညျပွီး လှုပျရှားတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုသတ်တဝါတှထေဲမှာ လိငျမှုကိစ်စကို အခြိနျကွာနိုငျသမြှကွာအောငျဆှဲထားပွီး သာယာမှုကို ပိုမိုခံစားခငျြတတျကွတာက လူသားတှပေဲ ရှိပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ၊ ခငျဗြားတို့၊ ကြုပျတို့လို ယောင်ျကြားတှအေားလုံးက ကိစ်စပွီးဖို့ကို မထိနျးနိုငျပဲ ကိုယျ့ပါတနာထကျ မွနျမွနျပွီးသှားမယျဆိုရငျ ကိုယျ့ကိုယျကို မကမြေနပျဖွဈတတျကွပါတယျ။
လလေ့ာမှုတှအေရ အလိုမပွညျ့သေးခငျ ကိစ်စပွီးသှားတတျတဲ့ပွဿနာကို ယောင်ျကြား (၃)ဦးမှာ (၁)ဦးနှုနျး ကွုံတှခေံ့စားနကွေရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ယောင်ျကြားလေးတဈယောကျအတှကျတော့ သူကိုယျတိုငျ ဒါမှမဟုတျ သူ့ရဲ့ပါတနာ အလိုမပွညျ့ခငျမှာ ကိစ်စပွီးသှားတိုငျး ကရြှုံးမှုတဈခုလို ခံစားရတတျပါတယျ။ တကယျလို့ ဒီလိုထငျမိတာ မှားနတေယျဆိုရငျ ဘာဖွဈမလဲ ?
ကြှမျးကငျြပညာရှငျတှရေဲ့အဆိုအရ ကိစ်စအမွနျပွီးတာကို အလိုမကတြတျတာက လူသားမြိုးနှယျမှာပဲ ရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ တကယျလို့ ကြှနျတျောတို့ ယောင်ျကြားတှအေားလုံးက အပွာဇာတျကားတှထေဲကလို လိငျတံအရှညျကွီးနဲ့ အခြိနျနှဈနာရီလောကျကွာအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျမယျဆိုရငျ ဘယျတော့မှ ကလေးမရနိုငျတော့ပဲ လူသားမြိုးစိတျတညျမွဲနနေိုငျမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။ (၁၀)စက်ကနျ့လောကျပဲ ကွာတယျဆိုတာက ကလေးရဖို့ အခှငျ့အလမျးပိုမြားပွီး မြိုးဆကျကို ပွနျ့ပှားစနေိုငျတယျလို့လညျး ပညာရှငျတှကေ ပွောထားပါတယျ။
လူသားတှမှော ဟိုအရငျအခြိနျတှတေုနျးကလို သားရဲကောငျတှေ၊ ပွိုငျဘကျမြိုးနှယျစုတှေ၊ ဘေးဒုက်ခအန်တရာယျတှေ မရှိတော့တဲ့အတှကျ မွနျမွနျဆနျဆနျ လိငျစိတျနိုးကွှ၊ မွနျမွနျလုပျ၊ မွနျမွနျပွီးတဲ့ ခတျေမရှိတော့ပါဘူး။ ဒီလို ယနခေ့တျေရဲ့ အိပျခနျးထဲကို အစှယျဖှေးဖှေးနဲ့ ကြားတဈကောငျ ရောကျမလာနိုငျတော့တဲ့အတှကျ လိငျကိစ်စသာယာမှုကို စိတျအေးအေးနဲ့ အခြိနျကွာကွာ ခံစားခငျြလာကွတာဖွဈပါတယျ။
အလိုမပွညျ့ခငျ ကိစ်စပွီးတာဟာ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ခြို့ယှငျးမှုတှနေဲ့ မသကျဆိုငျပဲ ကုသရခကျခဲတယျလို့ ဆရာဝနျတှကေ ဆိုပါတယျ။ သာမာနျ အမရေိကနျလူမြိုးတဈယောကျဟာ (၁၃)မိနဈလောကျကွာနိုငျပွီး၊ ဥရောပသားတှကေတော့ (၁၀)မိနဈလောကျပဲ ကွာတတျပါတယျ။ တကယျတော့ အလိုမပွညျ့ခငျ ကိစ်စပွီးသှားတဲ့အတှကျ မကမြေနပျဖွဈနကွေတဲ့ အမြိုးသားတှမှော တကယျ့ပွဿနာကွီးကွီးမားမား မရှိပါဘူး။
သခြောတာကတော့ စိတျနဲ့သကျဆိုငျပွီး အခြိနျတဈမိနဈတောငျမခံတဲ့ ယောင်ျကြားတှဟော စိတျပကျြလကျပကျြ ပိုဖွဈတတျသလို အိပျနရေငျးနဲ့တောငျ ကိစ်စပွီးသှားတတျကွပါသေးတယျ။ ဒီအခွအေနအေထိဖွဈတဲ့ အရအေတှကျကတော့ နညျးလှနျးပါတယျ။ အခြိနျကွာကွာ သာယာမှုကို ခံစားနိုငျဖို့အတှကျ ကွှကျသားလကေ့ငျြ့ခနျးတှေ ရှိပမေယျ့ အမြိုးသားတျောတျောမြားမြားက အမွနျကုစားနိုငျဖို့ကိုပဲ ပိုပွီးစိတျဝငျစားတတျကွပါတယျ။
အမွနျကုထုံးတှကေတော့ အမြိုးမြိုးရှိပါတယျ။ လိငျတံကိုဖွနျးရတဲ့ စပရေးတှေ၊ ဆေးပွားတှေ (တကယျတော့ ဒီဆေးပွားတှကေ စိတျကရြောဂါအတှကျသုံးတာဖွဈပါတယျ) ကနေ လိငျတံရဲ့အာရုံကွောကို ဖွတျလိုကျတာတှအေထိ အနုနညျးရော အကွမျးနညျးတှပေါ ရှိပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ သုကျလှတျခွငျးနဲ့ ဆိုငျတဲ့ အာရုံခံစနဈကလညျး သငျထိနျးခြုပျနိုငျစှမျးမရှိတာကွောငျ့ နာမညျကွီးပါတယျဆိုတဲ့ Viagra လိုဆေးမြိုးကတောငျ ခဏတာအတှကျပဲကောငျးပါလိမျ့မယျ။
ဒီလိုကိစ်စအတှကျ ယောင်ျကြားလေးဘကျကလညျး ကိုယျ့ကိုယျကို မကနြေပျဖွဈသလို မိနျးကလေးဘကျကလညျး အဆငျမပွဘေူးဆိုရငျ တတျကြှမျးနားလညျတဲ့ ဆရာဝနျတှနေဲ့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျကွညျ့ဖို့ လိုပါတယျ။ ဆရာဝနျတှရေဲ့ အဆိုအရတော့ စိတျသှားတိုငျးကိုယျမပါတတျတဲ့ ယောင်ျကြားလေးတှအေနနေဲ့ သူတို့ရဲ့စိတျကို ဆနျးစဈပွီး စိုးရိမျစိတျတှရေဲ့ ရငျးမွဈကို ဖျောထုတျဖို့ လိုတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အပွာကားတှထေဲက ဇာတျဆောငျအမြိုးသားတှနေဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို နှိုငျးယှဉျပွီး စိုးရိမျစိတျဝငျနတောလား။ ဒါမှမဟုတျ ပါတနာ မိနျးကလေးက မဖွဈနိုငျတဲ့ ကွာခြိနျမြိုးကို မြှျောလငျ့နတောလားဆိုတာတှကေို သိဖို့လိုပါတယျ။
ဒီလိုစိုးရိမျစိတျတှေ လြော့ပါးသှားမယျဆိုရငျ စဈမှနျတဲ့ယုံကွညျမှုနဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ လိငျမှုကိစ်စမှာ လိငျတံကို အထဲသှငျးဖို့တဈခုတညျးက အရေးကွီးတာမဟုတျပါဘူး။ အထဲသှငျးဖို့ထကျ အပွနျအလှနျ ဖွဖြေျောပေးနိုငျမယျဆိုရငျ စိုးရိမျစိတျတှနေညျးသှားပွီး ပိုပွီးစှမျးဆောငျနိုငျလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီတော့ အလိုမပွညျ့ခငျ ကိစ်စပွီးသှားတာက တဈခုခုခြို့ယှငျးနတောမဟုတျပါဘူး အမြိုးသားတို့ရေ။ စိတျနဲ့ပဲဆိုငျပါတယျ။ စိတျကိုအေးအေးထားမယျဆိုရငျ စှမျးဆောငျမှုတှေ ပိုကောငျးလာမှာ သခြောပါတယျ။
Next: စမတ်ဖုန်းတွေကြောင့် တိမ်ကောပျောက်ကွယ်လာသည့် အရာများ